ترجمة معاني سورة الشعراء - الترجمة النيبالية - جمعية أهل الحديث - موسوعة القرآن الكريم
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة النيبالية - جمعية أهل الحديث * - فهرس التراجم
ترجمة معاني سورة: الشعراء
آية: 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
رقم الصفحة: 367
سورة الشعراء - सूरतुश्शुअरा
१) ता–सीन्–मीम् ।
२) यी स्पष्ट किताबका आयतहरू (श्लोकहरू) हुन् ।
३) (हे पैगम्बर !) शायद तपाईले (यस दुःखबाट कि) यी मानिसहरूले ईमान ल्याउँदैनन् आफ्नो प्राण नै त्यागिदिनु हुनेछ ।
४) यदि हामीले चाहेको भए उनीहरूमाथि अकाशबाट एउटा यस्तो निशानी उतार्न सक्थ्यौं । कि जसको अगाडि उनीहरूका टाउको दीनताले झुकिरहुन् ।
५) र उनीहरूको पासमा रहमानको तर्फबाट जुन नवीन नसिहत पनि आउँछ, उनीहरू त्यसबाट विमुख हुने भइहाले ।
فَقَدۡ كَذَّبُواْ فَسَيَأۡتِيهِمۡ أَنۢبَٰٓؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ
६) अब जबकि उनीहरूले झूठो भनिसकेका छन् त शीघ्र नै उनीहरूले गरेको उपहासको वास्तविकता जानी हाल्नेछन् ।
७) के उनीहरूले धरतीलाई देखेनन् कि त्यसमा कसरी हामीले सबै प्रकारका उत्तम जोडाहरू उमारेका छौं ।
८) निश्चय नै यसमा ठूलो निशानी छ, (यसपछि पनि) उनीहरूमध्ये अधिकांश मान्नेवाला छैनन् ।
९) र निश्चय नै तिम्रो पालनकर्ता नै हो, जो अधिपत्यशाली, अत्यन्त दयावान छ ।
وَإِذۡ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئۡتِ ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
१०) र जब तपाईको पालनकर्ताले ‘‘मूसालाई’’ भन्यो कि अत्याचारी मानिसहरूको पासमा जाऊ ।
११) ‘‘फिरऔनको’’ जातिबन्धुको पासमा, के यिनीहरू आत्मसंयम् अपनाउँदैनन् ?
१२) मूसाले भनेः कि मेरो पालनकर्ता मलाई त भय छ कि कतै यिनीहरूले मलाई झूठा नठानुन् ।
१३) र मेरो छाति उकुसमुकुस हुन्छ र मेरो बोली रोकिन्छ, तसर्थ तिमी हारूनतिर पनि सन्देश (वह्य) पठाइदेऊ ।
१४) र उनीहरूको ममाथि मेरो एउटा कसूरको दावी पनि छ, तसर्थ मलाई यो पनि भय छ कि मलाई मारिहाल्नेछन् ।
قَالَ كـَلَّاۖ فَٱذۡهَبَا بِـَٔايَٰتِنَآۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسۡتَمِعُونَ
१५) अल्लाहबाट आदेश भयो कदापि यस्तो हुनेछैन तिमी दुवैजना हाम्रा निशानीहरू लिएर जाऊ, हामी तिम्रो साथमा सुन्नेवाला छौं ।
१६) (अतः) तिमी दुवै फिरऔनको पासमा जाऊ र भनः कि निश्चितरूपले हामी संसारको पालनकर्ताको तर्फबाट पठाइएका हौं ।
أَنۡ أَرۡسِلۡ مَعَنَا بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ
१७) र (यसकारण आएका हौं) कि तिमीहरू बनी इस्राईललाई हाम्रो साथमा जाने अनुमति देऊ ।
१८) फिरऔनले (मूसासित) भन्यो कि के हामीले तिमीलाई तिम्रो बाल्यकालमा आफूकहाँ पालेका थिएनौं ? र तिमीले तिम्रो जीवनका धेरै वर्ष हामीकहाँ बिताएका थिएनौ ?
१९) फेरि तिमीले आफ्नो त्यो काम गर्यौ जुन तिमीलाई थाहा छ । तिमी साह्रै नै कृतघ्न छौ ।
رقم الصفحة: 368
२०) (मूसाले) भनेः कि (हो) त्यो काम मैले त्यस बेला गरेको थिएँ जब म बाटो बिर्सिएकाहरूमध्येका थिएँ ।
२१) अनि जब मलाई तिम्रो भय लाग्यो त म तिमीकहाँबाट भागिहालें, अनि मेरो पालनकर्ताले मलाई आदेश र ज्ञान प्रदान गर्यो र मलाई आफ्ना सन्देशवाहरूकमध्येको बनायो ।
وَتِلۡكَ نِعۡمَةٞ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنۡ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ
२२) के ममाथि तिम्रो यही भलाई हो जुन तिमीले देखाइरहेका छौ कि तिमीले बनि इस्राईललाई दास बनाएर राखेका छौ ।
२३) फिरऔनले भन्योः कि सारा संसारको मालिक भनेको के हो ?
२४) उनले भनेः कि ऊ आकाशहरू र पृथ्वी र जे जति त्यसको बीचमा छन् सबैको पालनकर्ता हो । यदि तिमी ईमानवाला छौ भने ?
२५) फिरऔैनले आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूलाई भन्यो कि तिमीहरू सुनिरहेका छैनौ ।
२६) मूसाले भने कि ऊ तिम्रो र तिम्रा बाबुबाजेको पालनकर्ता हो ।
२७) फिरऔनले भन्योः कि मानिसहरू हो यो संदेष्टा (पैगम्बर) जुन तिमीहरूतिर पठाइएको छ, बिलकुल्लै पागल छ ।
२८) मूसाले भनेः कि पूर्व र पश्चिम र जे–जति यी दुवैको बीचमा छन् सबैको रब (पालनकर्ता) पनि उही हो, यदि तिमीमा बुझ्ने बुद्धि छ भने ।
२९) फिरऔनले भन्योः कि सुन यदि तिमीले म बाहेक अरु कसैलाई पूज्य बनायौ भने म तिमीलाई बन्दी बनाएर राख्छु ।
३०) मूसाले भने कि यदि म तिम्रो पासमा कुनै स्पष्ट कुरा ल्याऊँ तैपनि ?
قَالَ فَأۡتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
३१) फिरऔनले भन्यो, यदि तिमी साँचो हौ भने त्यसलाई (ल्याएर) पेश गर ।
३२) अनि उनले (मूसाले) आफ्नो लठ्ठी त्यतिबेला (जमिनमा) फ्याँके जुन त्यतिखेरै एउटा प्रत्यक्ष अजिङ्गर बनिहाल्यो ।
३३) र आफ्नो हात जब बाहिर निकाले तब त्यतिखेरै त्यो हेर्नेहरूको अगाडि सेतो टल्कने देखिनथाल्यो ।
३४) फिरऔनले आफ्नो वरिपरिका नायकहरूसित भन्योः कि निश्चय नै यो त ठूलो जादूगर हो ।
३५) यसले चाहन्छ, कि आफ्नो जादूको शक्तिले तिमीलाई तिम्रो भूमिबाट निकालिदेओस् तसर्थ तिम्रो के विचार छ ?
३६) उनीहरूले भनेः कि तपाईले यसलाई र यसको भाइलाई समय दिनुस् र सबै शहरहरूमा अग्रदूतहरूलाई पठाइदिनुहोस् ।
३७) ताकि सबै प्रविण जादूगरलाई तपाईको पासमा ल्याउन् ।
३८) अनि एक निश्चित दिनको समयमा सबै जादूगरहरू एकत्रित गरिए ।
३९) र सर्वसाधारण मानिसहरूसित भनियोः कि तिमी (सबै) भेला हुनुपर्दछ ।
رقم الصفحة: 369
४०) ताकि यदि जादूगरहरू विजयी हुन्छन् भने हामी उनकै अनुयायी भइहाल्छौं ।
४१) जादुगरहरू आएर फिरऔनसित भन्न थालेः कि यदि हामी विजयी भयौं भने के हामीलाई पुरस्कार पनि प्राप्त हुनेछ ?
४२) फिरऔनले भन्योः, हो र निश्चय नै तिमी त्यसबेला मेरो दरबारिया मानिसहरूमध्येबाट भइहाल्नेछौ ।
४३) मूसाले उनीहरूसित (जादूगरहरूसित) भनेः कि जे कुरा फ्याँक्नु छ फ्याँक ।
४४) तब उनीहरूले आफ्नो डोरी र लठ्ठीहरू फ्याँके र भन्न थालेः कि फिरऔनको प्रतापले हामी विजयी हुनेछौं ।
४५) अनि मूसाले पनि आफ्नो लठ्ठी (भूईंमा) फ्याँके जसले ती कुराहरूलाई, जुनकि जादुगरहरूले बनाएका थिए, निल्न थाल्यो ।
४६) यो हेरेर स्वस्फूर्ति ढंगले सिज्दा (ढोग) गरे ।
४७) (र) भन्न थाले कि हामीले सारा संसारको पालनहारमाथि ईमान ल्यायौं ।
४८) अर्थात् मूसा र हारूनको पालनलहारमाथि ।
४९) फिरऔनले भन्योः, कि मेरो आज्ञा बेगैर तिमीहरूले उसमाथि ईमान ल्यायौ ? निश्चय नै यही तिमी सबैको प्रमुख नायक हो, जसले तिमीलाई जादू सिकाएको छ । तसर्थ शीघ्र नै तिमीहरूले थाहा पाइहाल्ने छौ । म शपथ लिन्छु कि म तिम्रा हात र खुट्टाहरू विपरित दिशाहरूबाट कटाइदिनेछु र तिमी सबैलाई फाँसीमा झुन्ड्याइदिनेछु ।
५०) उनीहरूले भनेः केही डर छैन । निःसंदेह हामी त आफ्नो पालनकर्तातिर नै फर्केर जानेवाला छौं ।
५१) हामीलाई मात्र यो नै आशा छः कि हाम्रो पालनकर्ता हाम्रो त्रुटिहरूलाई क्षमा गरिदिनेछ, किनभने हामीले सबभन्दा पहिला ईमान ल्यायौं ।
۞ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنۡ أَسۡرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ
५२) र हामीले ‘‘मूसातिर’’ ‘‘वह्य’’ (अल्लाहको वाणी) पठायौं कि मेरा भक्तहरूलाई लिएर रातै–रात निस्किहाल, निश्चय नै तिमीलाई पछ्याइनेछ ।
५३) यसपछि फिरऔनले शहरहरूमा दूतहरू पठायो ।
إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَةٞ قَلِيلُونَ
५४) किन ‘‘कि यिनीहरू एकदम सानो संख्यामा छन् ।’’
५५) र यिनीहरूले हामीलाई क्रोधित पारिराखेका छन् ।
५६) र निश्चयनै हामी संख्यामा धेरै र सबै सर–सामानसहित सजग छौं ।
فَأَخۡرَجۡنَٰهُم مِّن جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ
५७) अन्ततः हामीले उनीहरूलाई बगैंचा र पानीका श्रोतहरूबाट निष्कासित गरिदियौं ।
५८) र खजाना र राम्रा ठाउँहरूबाट पनि ।
كَذَٰلِكَۖ وَأَوۡرَثۡنَٰهَا بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ
५९) (उनीहरूको साथमा हामीले) यस्तो गर्यौं र यी सबै कुराहरूको उत्तराधिकारी हामीले बनी इस्राईलको सन्ततिलाई बनाइदियौं ।
६०) तसर्थ फिरऔनीहरूले सूर्योदय हुनासाथ तिनीहरूलाई खोज्न हिंडे ।
رقم الصفحة: 370
فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلۡجَمۡعَانِ قَالَ أَصۡحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدۡرَكُونَ
६१) जब दुवै समूहले एक अर्कालाई देखिहाल्यो, तब मूसाका साथीहरूले भन्नथाले कि हामी त निश्चय नै समातियौं ।
قَالَ كـَلَّآۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهۡدِينِ
६२) मूसाले भने, कदापि होइन मेरो पालनकर्ता मेरो साथमा छ, उसले पक्कै मलाई बाटो देखाउनेछ ।
६३) त्यसबखत हामीले मूसातिर ‘‘वह्य’’ पठायौं कि आफ्नो लठ्ठीले समुद्रमाथि प्रहार गर अनि त्यसै बेला समुद्र फाटिहाल्यो र पानीको हरेक टुक्रा ठूलो पहाड जस्तो भइहाल्यो ।
६४) र हामीले अर्को समूहलाई पनि त्यहीं निकट ल्याएर उभ्याइदियौं ।
६५) र हामीले ‘‘मूसा’’ र उनको साथमा भएका सबैलाई बचाइहाल्यौं ।
६६) अनि अर्को समूहलाई डुबाइदियौं ।
६७) निःसन्देह यसमा ठूलो निशानी छ, तापनि उनीहरूमध्ये अधिकतर ईमानवाला छैनन् ।
६८) र निश्चय नै तपाईको पालनकर्ता अधिपत्यशाली, अत्यन्त दयावान छ ।
६९) र उनीहरूलाई इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को वृतान्त पनि सुनाइदिनुस् ।
७०) जब उनले आफ्नो पिता र आफ्नो जातिबन्धुका मानिसहरूसित भनेः कि तिमी कुन कुराको पूजा गर्दछौ ?
७१) उनीहरूले जवाफ दिए कि हामी मूर्तिहरूको पूजा गर्दछौं र उनीहरूको सेवामा लागिरहने छौं ।
७२) (इब्राहीमले) भनेः कि, जब तिमी उनीहरूलाई पुकार्दछौ, त के उनीहरूले तिम्रो सुन्दछन् ?
७३) वा तिमीलाई फाइदा दिन वा नोक्सानी पुर्याउन सक्दछन् ?
७४) उनीहरूले भने, (यो हामी केही जान्दैनौं) बरु हामीले आफ्ना बाबु बाजेलाई यस्तै गरेको देखेका छौं ।
७५) (इब्राहीमले) भने, के तिमीले देख्यौ कि जसलाई तिमी पूजिराखेका छौ ।
७६) तिमी पनि र तिम्रा अघिका बाबुबाजे पनि ।
७७) उनीहरू मेरा शत्रु हुन्, अल्लाह बाहेक जो ब्रह्माण्डको स्वामी हो ।
७८) जसले मलाई सृष्टि गर्यो र उसैले मलाई मार्गदर्शन गर्दछ ।
७९) उही नै हो जसले मलाई खुवाउँछ र पिलाउँछ ।
८०) र जब म विरामी पर्दछु त उसैले मलाई निको पार्छ ।
८१) र उसैले मलाई मार्नेछ (र) पुनः जीवित गर्नेछ ।
८२) र (उही नै हो) जोसित म आशा राख्दछु, कि कियामतको दिन मेरा पापहरूलाई क्षमा गर्नेछ ।
رَبِّ هَبۡ لِي حُكۡمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ
८३) हे ब्रह्माण्डको पालक ! मलाई निर्णय गर्ने शक्ति प्रदान गर र असल मानिसहरूमा शम्मिलित गर ।
رقم الصفحة: 371
८४) र पछि आउनेहरूमा पनि मेरो राम्रो चर्चा बाँकी राख ।
८५) र मलाई उपकारहरूले भरिएको जन्नत (स्वर्ग) का उत्तराधिकारीहरूमा शम्मिलित गर ।
८६) र मेरो बाबुलाई क्षमा गरिदेऊ । निश्चय नै ऊ पथभ्रष्ट मानिसहरूमध्येको थियो ।
८७) र जुन दिन मानिसहरू पुनः जीवित भई उठाइनेछन् मलाई अपमानित नगर्नु ।
८८) जुन दिन धन सम्पत्ति र सन्तानहरू कुनै काम लाग्ने छैनन् ।
८९) तर फाइदावाला उही हुनेछ जो मानिस अल्लाहको पासमा पवित्र हृदय लिई जानेछ ।
९०) र जन्नत संयमीहरूको एकदम समीपमा ल्याइनेछ ।
९१) र मार्ग विचलितहरूको लागि नर्क अगाडि ल्याइनेछ ।
९२) र उनीहरूसित सोधिनेछः कि जसलाई तिमी पूज्दथ्यो, उनीहरू कहाँ छन् ?
९३) अल्लाह बाहेक जो पूज्य थिए, के उनीहरू तिम्रो केही सहायता गर्नसक्दछन् ? वा कुनै बदला लिन सक्दछन् ?
९४) अनि तिनीहरू र सबै मार्गविचलितहरू टाउको निहुर्याई नर्कमा हालिनेछन् ।
९५) र शैतानका सेनाहरू सबै (नर्कमा जानेछन्) ।
९६) (त्यहाँ) उनीहरू एकआपसमा झगाडा गर्दै भन्नेछन् ।
९७) किः ‘‘अल्लाहको शपथ ! हामी त खुल्लारूपमा मार्गविचिलित थियौं ।’’
९८) जबकि हामीले तिमीलाई ब्रह्माण्डको पालनकर्ता अल्लाह बराबर ठान्दथ्यौं ।
९९) र हामीलाई यी अपराधीहरू बाहेक अरुले पथभ्रष्ट गरेनन् ।
१००) अब हाम्रो सिफारिश गर्नेवाला कोही छैन ।
१०१) र न कोही घनिष्ट मित्र छ ।
१०२) कति राम्रो हुने थियो, यदि हामीलाई (संसारमा) पुनः एक पटक जानमिल्ने भए, त हामी पक्का र सच्चा मोमिनहरूमध्येका भैहाल्थ्यौं ।
१०३) यस घटनामा निश्चय नै एउटा ठूलो निशानी छ तैपनि उनीहरूमध्ये धेरैजसोले ईमान ल्याउने छैनन् ।
१०४) र निःसन्देह तपाईको पालनकर्ता नै अधिपत्यशाली अत्यन्त दयावान छ ।
१०५) नूहको जातिबन्धुले पनि रसूलहरूलाई झूठा भने ।
१०६) जब कि उनीहरूसित उनका भाइ नूहले भनेः कि के तिमीलाई अल्लाहको डर छैन ?
१०७) सुन म तिम्रो लागि अल्लाहको विश्वासनिय संदेष्टा हूँ ।
१०८) तसर्थ तिमीहरूले अल्लाहसित डर मान्नु र मेरो भनाई मान्नु ।
१०९) म यस कामको निम्ति तिमीबाट कुनै पारिश्रमिक माग्दिन । मेरो पारिश्रमिक त सम्पूर्ण संसारको पालनकर्ताको जिम्मामा छ ।
११०) अनि अल्लाहको भयराख र मेरो आदेश पालनगर ।
۞ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلۡأَرۡذَلُونَ
१११) उनीहरूले भनेः कि के हामी तिम्रो भनाई मानौं जबकि तिमीलाई मान्नेहरू अत्यन्तै नीच हुन् ।
رقم الصفحة: 372
११२) (नूहले) भनेः कि मलाई के थाहा कि उनीहरू पहिला के गर्दै आएका थिए ?
११३) उनीहरूको हिसाब त मेरो पालनकर्ताको जिम्मामा छ यदि तिमीमा चेतना आइदिए कति राम्रो हुने थियो ।
११४) र म मोमिनहरूलाई धपाउनेवाला होइन ।
११५) म त स्पष्टरूपले सचेत गर्नेवाला मात्र हूँ ।
११६) उनीहरूले भने कि हे ‘‘नूह’’ यदि तिमीले (आफ्नो यस कुराबाट) पछि हटेनौ भने तिमी ढुंगा हानी मारिनेमध्येका हुनेछौ ।
११७) (नूहले) भनेः कि हे मेरो पालनकर्ता ! मेरो जातिबन्धुले त मलाई असत्य भनिदियो ।
११८) तसर्थ तिमीले मेरो र उनीहरूको बीचमा कुनै स्पष्ट निर्णय गरिदेऊ र मलाई र जुन मोमिन मेरो साथमा छन्, उनीहरूलाई बचाइहाल ।
११९) अतः हामीले उनलाई र उनका साथीहरूलाई भरेको डुङ्गामा सवार गराएर बचाइहाल्यौं ।
१२०) तत्पश्चात शेष सबै मानिसहरूलाई हामीले डुबाइदियौं ।
१२१) निःसन्देह यसमा ठूलो निशानी छ । तापनि यिनीहरूमध्ये अधिकतर ईमान ल्याउनेवाला थिएनन् ।
१२२) र निःसन्देह तिम्रो रब सर्वशक्ति सम्पन्न (र) अत्यन्त दयावान छ ।
१२३) आदको समुदायले पनि संदेष्टाहरूलाई झूठा भने ।
१२४) जबकि उनीसित उनको भाइ ‘‘हूदले’’ भनेः, के तिमी (अल्लाहबाट) डराउँदैनौ ?
१२५) म त तिम्रो ईमानदार संदेष्टा (पैगम्बर) हूँ ।
१२६) तसर्थ अल्लाहसित भयगर र मेरो भनाई मान ।
१२७) र म यसको तिमीबाट कुनै पारिश्रमिक माँग्दिन । मेरो बदला त विश्वको पालनकर्ताको जिम्मामा छ ।
१२८) के तिमीले प्रत्येक उच्च स्थानमा खेल तमाशाको लागि व्यर्थ एउटा स्मारकको निर्माण गर्दैछौ ?
१२९) र ठूलो कारीगरीवाला भव्य महल बनाइरहन्छौ, लाग्दछ तिमीलाई सधैं यहीं बसिरहनुछ ।
१३०) र जब कसैलाई समात्छौ त पूर्ण अत्याचारी तरिकाले समात्छौ ।
१३१) त्यसर्थ अल्लाहसित डर र मेरो आज्ञापालन गर ।
१३२) र उससित, तर्स जसले तिमीलाई ती कुराहरूद्वारा सहायता गर्यो, जसलाई तिमी जान्दछौ ।
१३३) उसले तिमीलाई पशु र सन्तानहरूबाट मद्दत गर्यो ।
१३४) र बगैंचाहरूबाट र श्रोतहरूबाट ।
१३५) मलाई तिम्रो बारेमा एउटा ठूलो दिनको यातनाको भय छ ।
१३६) उनीहरूले भन्न थालेः कि हामीलाई उपदेश गर वा नगर, बराबर छ ।
رقم الصفحة: 373
१३७) यो त मात्र पहिलाका मानिसहरूको चल्दै आएको रीति हो ।
१३८) र हामीलाई कहिले पनि यातना दिइनेछैन ।
१३९) उनीहरूले ‘‘हूदलाई’’ असत्य भने, त हामीले उनीहरूलाई नष्ट गरिहाल्यौं । निःसन्देह यसमा निशानी छ र यिनीहरूमध्ये अधिकांश ईमानवाला थिएनन् ।
१४०) निःसंदेह तपाईको पालनकर्ता उही हो सर्वशक्ति सम्पन्न अत्यन्त दयावान ।
१४१) समूदको समुदायले पनि रसूलहरूलाई असत्य भने ।
१४२) (जबकि) उनीसित उनको भाइ ‘‘सालेहले’’ भने कि तिमीहरू अल्लाहसँग डराउँदैनौ ?
१४३) निःसंदेह म त तिम्रोलागि अल्लाहको विश्वसनीय पैगम्बर (दूत) हूँ ।
१४४) अतः तिमी अल्लाहसित डर र मेरो कुरा मान ।
१४५) (र) म यस कामको लागि तिमीसित कुनै प्रतिफल माँग्दैन । मेरो प्रतिफल त सम्पूर्ण जगतको स्वामीको जिम्मामा छ ।
१४६) के जुन कुराहरू यहाँ उपलब्ध छन्, त्यसमा तिमी निश्चिंत छोडिदिइनेछौ ?
فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ
१४७) (अर्थात) बगैंचा र श्रोतहरूमा ।
१४८) र खेती र यी खजूरका बगैचाहरू जसको झुप्पाहरू ताजा र कोमल हुन्छन् ।
१४९) र तिमीले पहाडहरूलाई काटी सुन्दर घर बनाउँदैछौ ।
१५०) तसर्थ अल्लाहसित डर र मैले भनेको मान ।
१५१) र सीमाउल्लघंन गर्नेहरूको कुरा नमान ।
१५२) जो देशमा दंगा फसाद मचाउँछन् र सुधार गर्दैनन् ।
१५३) उनीहरूले भने कि तिमी त जादूले मोहित पारिएकामध्येबाट हौ ।
مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا فَأۡتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
१५४) तिमी त हामी जस्तै मानिस हौ । यदि तिमी साँचो हौ भने कुनै चमत्कार प्रस्तुत गर ।
१५५) (सालेहले) भने (हेर) यो ऊँटनी हो, एक दिन यसको पानी पिउने पालो हो, र एक निश्चित दिन पानी लिने पालो तिम्रो हो ।
१५६) खबरदार यसलाई कुनै कष्ट नपुर्याउनु, अन्यथा तिमीलाई एकबडो दिनको यातनाले समात्ने छ ।
१५७) तैपनि उनीहरूले त्यसको घुँडा काटिदिए, अनि पछि लज्जित भए ।
१५८) तसर्थ उनलाई यातनाले समातिहाल्यो । निःसन्देह यसमा निशानी छ र यिनीहरूमध्ये अधिकांश ईमानवाला थिएनन् ।
१५९) र निःसंदेह तपाईको पालनकर्ता सर्वशक्ति सम्पन्न र अत्यन्त दयावान छ ।
رقم الصفحة: 374
१६०) ‘‘लूतको’’ जातिबन्धुले पनि रसूलहरूलाई असत्य भने ।
१६१) (जब) उनीहरूसित उनका भाइ ‘‘लूतले’’ भने कि तिमी अल्लाहसित किन डराउँदैनौ ?
१६२) निःसंदेह म तिम्रो लागि विश्वसनीय रसूल हूँ ।
१६३) तसर्थ तिमी अल्लाहसित डर र मेरो भनाई मान ।
१६४) र म तिमीसित यसको प्रतिफल माँग्दिन । मेरो प्रतिफल त विश्वको पालनकर्ताको जिम्मामा छ ।
१६५) के संसारमा तिमी यस्ता हौ जो पुरुषसंग व्यभिचार (गुदामैथुन) गर्दछौ ?
१६६) र तिम्रो पालनकर्ताले तिम्रो निम्ति जुन महिलाहरूलाई तिम्रो पत्नीहरू बनाएको छ, उनीहरूलाई परित्याग गरिदिन्छौ । सत्य कुरो त यो हो कि तिमी सीमाउल्लघंन गर्नेवालाहरू नै हौ ।
१६७) उनीहरूले जवाफ दिए कि हे ‘‘लूत’’! यदि तिमी मान्ने छैनौ भने देश निकाला गरिनेछौ ।
१६८) उनले भने कि म तिमीहरूको कामबाट अत्यन्त अप्रसन्न छु ।
१६९) हे मेरो पालनकर्ता ! मलाई र मेरो परिवारलाई (मान्नेवालाहरूलाई) जुन काम यिनीहरूले गर्दछन्, त्यसको परिणामबाट बचाऊ ।
१७०) तसर्थ हामीले उनलाई र उनका साथदिने सबैलाई बचायौं ।
१७१) तर एउटी बृद्धा (बाहेक) जुन पछि रहनेहरूमध्येकी थिई ।
१७२) त्यस उपरान्त हामीले अरु सबैलाई नष्ट गरिहाल्यौं ।
१७३) र हामीले उनीहरूमाथि एउटा विशेष प्रकारको वर्षा गरायौं, जुन वर्षा अत्यन्त नराम्रो थियो र ती चेताइएका मानिसहरूमाथि पर्यो ।
१७४) यो घटना पनि पूरै निशानी छ र उनीहरूमध्ये पनि अधिकांश ईमान ल्याउनेवाला थिएनन् ।
१७५) र निःसंन्देह तिम्रो पालनकर्ता उही हो अधिपत्यशाली र अत्यन्त दयावान
१७६) ‘‘एैकाः’’ वालाले (वनमा बस्नेहरूले) पनि रसूलहरूलाई झूठा भने ।
१७७) जब कि उनीसित ‘‘शुऐबले’’ भनेः कि तिमी किन डराउँदैनौ ।
१७८) निःसंन्देह म त तिम्रो लागि विश्वसनीय पैगम्बर हूँ ।
१७९) तसर्थ अल्लाहसित डर र मेरो भनाई मान ।
१८०) र म यस (काम) को तिमीसित कुनै प्रतिफल माँग्दिन । मेरो प्रतिफल त संसारको पालनकर्ताको जिम्मामा छ ।
۞ أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ
१८१) (हेर) नापतौल पूरा गर्नेगर र कम दिनेहरूमा शम्मिलित नहोऊ ।
१८२) र तराजु सिधा पारेर ठीक ढंगले तौल्नेगर ।
१८३) र मानिसहरूलाई उनका चीजहरू कम पारेर नदेऊ र धरतीमा उत्पात मच्चाउँदै नहिंड ।
رقم الصفحة: 375
१८४) उस अल्लाहसित डराऊ जसले तिमीलाई र अघिका पुस्ताहरूलाई सृष्टि गरेको हो ।
१८५) उनीहरूले भनेः कि तिमी त जादू गरिएकाहरूमध्येका हौ ।
وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ
१८६) र तिमी त हामी जस्तै एउटा मानिस हौ र हाम्रो विचारमा तिमी झूठो हौ ।
فَأَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
१८७) यदि तिमी साँचो हौ भने हामीमाथि आकाशको (एउटा) टुक्रा खसाल ।
قَالَ رَبِّيٓ أَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُونَ
१८८) (शुऐबले) भने कि, जुन काम तिमीले गर्दछौ, मेरो पालनकर्ता त्यसलाई राम्ररी जान्दछ ।
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمِ ٱلظُّلَّةِۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ
१८९) किन भने उनीहरू उनलाई झूठा भनिहाले । त्यसकारण छायाँवाला दिनको यातनाले उनीहरूलाई समातिहाल्यो । निश्चय नै त्यो ठूलो (दिनको) यातना थियो ।
१९०) निःसन्देह यसमा ठूलो निशानी छ तर यिनीहरूमध्ये धेरै ईमानवाला थिएनन् ।
१९१) र निश्चय नै तिम्रो पालनकर्ता त उही हो अधिपत्यशाली र अत्यन्त दयावाला ।
१९२) र कुनै शंका र संदेह बिना यो (कुरआन) संसारको पालनहारद्वारा उतारिएको हो ।
१९३) यसलाई विश्वसनीय फरिश्ताले लिएर आएको हो ।
१९४) तपाईको हृदयमा उतारियो ताकि तपाई (मानिसहरूलाई) सावधान गर्नेहरूमध्येको भइहाल्नुस् ।
بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ
१९५) (र) स्पष्ट अरबी भाषामा छ ।
وَإِنَّهُۥ لَفِي زُبُرِ ٱلۡأَوَّلِينَ
१९६) र यस किताबको चर्चा अगाडिका संदेष्टाहरूको किताबमा पनि गरिएको छ ।
أَوَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ ءَايَةً أَن يَعۡلَمَهُۥ عُلَمَٰٓؤُاْ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ
१९७) के उनीहरूको लागि यो निशानी पर्याप्त छैन, कि कुरआनको सच्चाईलाई इज्राईलका विद्वानहरू पनि जान्दछन् ।
१९८) र यदि हामीले यसलाई अरबी भाषा बाहेक अरु कुनै भाषाभाषीमाथि अवतरण गरेको भए ।
فَقَرَأَهُۥ عَلَيۡهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ مُؤۡمِنِينَ
१९९) र उसले यिनीहरूलाई त्यो पढेर सुनाउँदा यिनीहरूले यसलाई मान्दैनथे ।
كَذَٰلِكَ سَلَكۡنَٰهُ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ
२००) यसै प्रकार हामीले अपराधीहरूका हृदयमा त्यस इन्कारीलाई बसालिदियौं ।
لَا يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ
२०१) र उनीहरूले जबसम्म कष्टदायी यातना देख्दैनन् ईमान ल्याउने छैनन् ।
فَيَأۡتِيَهُم بَغۡتَةٗ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ
२०२) त्यो कष्ट उनीहरूमाथि एक्कासी आइपर्नेछ र उनीहरूलाई थाहा पनि हुनेछैन ।
فَيَقُولُواْ هَلۡ نَحۡنُ مُنظَرُونَ
२०३) त्यो बेला भन्नेछन्ः के हामीले केही मोहलत पाउनेछौं ?
२०४) त के उनीहरूले हाम्रो यातनालाई शीघ्र चाहिराखेका छन् ?
२०५) अच्छा, यो पनि बताऊ कि यदि हामीले उनीहरूलाई वर्षौसम्म फाइदा उठाउन दियौं ।
ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ
२०६) तै पनि उनीमाथि त्यो यातना आइपुग्यो, जसको बारेमा उनीहरूलाई वाचा गरिन्थ्यो ।
رقم الصفحة: 376
مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ
२०७) तसर्थ जुन फाइदा यिनीहरूले लिइराखेका थिए, उनीहरूलाई केही काम आउनेछैन ?
وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ
२०८) र हामी कुनै बस्ती नष्ट गरेनौ तर त्यसको निम्ति सावधान गर्नेवालाहरू पठाउने गरेका थियौं ।
२०९) सावधान गराइदिनुको लागि, र हामी अत्याचारी होइनौं ।
२१०) यस कुरआनलाई शैतानहरूले लिएर अवतरित भएका होइनन् ।
وَمَا يَنۢبَغِي لَهُمۡ وَمَا يَسۡتَطِيعُونَ
२११) उनीहरू न यसकामको लागि योग्य छन् र न उनीहरू यसको क्षमता राख्दछन् ।
२१२) बरु उनीहरू त यसलाई सुन्नेबाट पनि बञ्चित गरिएका छन् ।
فَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُعَذَّبِينَ
२१३) तसर्थ तिमीले अल्लाह बाहेक कुनै अरु पूज्यलाई नपुर्कानु, अन्यथा तिमी पनि यातना पाउनेमध्येका हुनेछौ ।
२१४) र आफ्ना नजिकका आफन्तहरूलाई सावधान गरिदिनु ।
२१५) ईमान ल्याएर तपाईको अनुयायी भइसकेकाहरूसित नम्रतापुर्वक व्यवहार गर्नु ।
فَإِنۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تَعۡمَلُونَ
२१६) यदि यी मानिसहरूले तपाईको अवज्ञा गर्दछन् भने भनिदिनुस् कि मेरो तिम्रो कर्महरूसित कुनै सरोकार छैन ।
२१७) आफ्नो सम्पूर्ण भरोसा सर्वशक्ति सम्पन्न (र) दयावान अल्लाहमाथि गर ।
ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ
२१८) जसले तिमीलाई देखिरहन्छ (तहज्जुदको बेला) जब तिमी उठ्दछौ ।
وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ
२१९) र सिज्दा गर्नेहरूमा तिम्रो आवत जावतलाई पनि ।
२२०) ऊ सबै सुन्नेवाला जान्नेवाला छ ।
२२१) के मैले तिमीलाई भनू“ कि शैतानहरू कसमाथि ओर्लन्छन् ?
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٖ
२२२) तिनीहरू प्रत्येक झूठा अपराधीमाथि ओर्लन्छन् ।
२२३) जसले सुनेको कुरा भन्छन् र उनीहरूमध्ये अधिकांश झूठा छन् ।
२२४) कविहरूको अनुशरण त मार्गविचलित मानिसहरूले नै गर्ने गर्दछन् ।
أَلَمۡ تَرَ أَنَّهُمۡ فِي كُلِّ وَادٖ يَهِيمُونَ
२२५) के तपाईले देख्नु भएन कि उनीहरू हरेक क्षेत्रमा बहकिरहन्छन् ।
२२६) र उनीहरू भन्दछन् त्यो कुरा, जुन गर्दैनन् ।
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱنتَصَرُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُواْۗ وَسَيَعۡلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبٖ يَنقَلِبُونَ
२२७) ती मानिसहरू बाहेक जसले ईमान ल्याए र असल काम गरे र अल्लाहलाई धेरै स्मरण गरे । र आफूमाथि अत्याचार भएपछि प्रतिकार गरे, अत्याचारीहरूले शीघ्र नै थाहा पाउनेछन् कि कतातिर फर्कनु पर्नेछ ।
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة النيبالية - جمعية أهل الحديث - فهرس التراجم
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة النيبالية، ترجمة جمعية أهل الحديث المركزية - النيبال.
1. सूरतुल् फातिहा - الفاتحة 2. सूरतुल् बकरः - البقرة 3. सूरतु अाले इम्रान - آل عمران 4. सूरतुन्निसा - النساء 5. सूरतुल् माइदः - المائدة 6. सूरतुल् अनअाम - الأنعام 7. सूरतुल् अअराफ - الأعراف 8. सूरतुल् अन्फाल - الأنفال 9. सूरतुत्ताैबः - التوبة 10. सूरतु यूनुस - يونس 11. सूरतु हूद - هود 12. सूरतु यूसुफ - يوسف 13. सूरतुर्रअद - الرعد 14. सूरतु इब्राहीम - ابراهيم 15. सूरतुल् हिज्र - الحجر 16. सूरतुन्नहल - النحل 17. सूरतुल् इस्रा - الإسراء 18. सूरतुल् कहफ - الكهف 19. सूरतु मरयम - مريم 20. सूरतु ताहा - طه 21. सूरतुल् अंबिया - الأنبياء 22. सूरतुल् हज्ज - الحج 23. सूरतुल् मुमिनून - المؤمنون 24. सूरतुन्नूर - النور 25. सूरतुल् फुर्कान - الفرقان 26. सूरतुश्शुअरा - الشعراء 27. सूरतुन्नमल - النمل 28. सूरतुल् कसस - القصص 29. सूरतुल् अन्कबूत - العنكبوت 30. सूरतुर्रूम - الروم 31. सूरतु लुकमान - لقمان 32. सूरतस्सजिदः - السجدة 33. सूरतुल् अहजाब - الأحزاب 34. सूरत सबा - سبإ 35. सूरतु फातिर - فاطر 36. सूरतु यासीन - يس 37. सूरतुस्साफ्फात - الصافات 38. सूरतु साद - ص 39. सूरतुज्जुमर - الزمر 40. सूरतु गाफिर - غافر 41. सूरतु फुस्सिलत - فصلت 42. सूरतुश्शूरा - الشورى 43. सूरतुज्जुखरूफ - الزخرف 44. सूरतुद्दुखान - الدخان 45. सूरतुल् जासिया - الجاثية 46. सूरतुल् अहकाफ - الأحقاف 47. सूरतु मुहम्मद - محمد 48. सूरतुल् फतह - الفتح 49. सूरतुल् हुजुरात - الحجرات 50. सूरतु काफ - ق 51. सूरतुज्जारियात - الذاريات 52. सूरतुत्तूर - الطور 53. सूरतुन्नज्म - النجم 54. सूरतुल् कमर - القمر 55. सूरतुर्रहमान - الرحمن 56. सूरतुल् वाकियह - الواقعة 57. सूरतुल् हदीद - الحديد 58. सूरतुल् मुजादिलह - المجادلة 59. सूरतुल् हश्र - الحشر 60. सूरतुल् मुमतहिना - الممتحنة 61. सूरतुस्सफ्फ - الصف 62. सूरतुल् जुमुअः - الجمعة 63. सूरतुल् मुनाफिकून - المنافقون 64. सूरतुत्तगाबुन - التغابن 65. सूरतुत्तलाक - الطلاق 66. सूरतुत्तहरीम - التحريم 67. सूरतुल् मुल्क - الملك 68. सूरतुल् कलम - القلم 69. सूरतुल् हाक्कः - الحاقة 70. सूरतुल् मअारिज - المعارج 71. सूरतु नूह - نوح 72. सूरतुल् जिन्न - الجن 73. सूरतुल् मुज्जम्मिल - المزمل 74. सूरतुल् मुद्दस्सिर - المدثر 75. सूरतुल् कियामः - القيامة 76. सूरतुल् इन्सान - الانسان 77. सूरतुल् मुर्सलात - المرسلات 78. सूरतुन्नबा - النبإ 79. सूरतुन्नाजिअात - النازعات 80. सूरतु अबस - عبس 81. सूरतुत्तक्वीर - التكوير 82. सूरतुल् इन्फितार - الإنفطار 83. सूरतुल् मुतफ्फिफीन - المطففين 84. सूरतुल् इन्शिकाक - الإنشقاق 85. सूरतुल् बुरूज - البروج 86. सूरतुत्तारिक - الطارق 87. सूरतुल् अअ्ला - الأعلى 88. सूरतुल् गाशियः - الغاشية 89. सूरतुल् पज्र - الفجر 90. सूरतुल् बलद - البلد 91. सूरतुश्शम्स - الشمس 92. सूरतुल्लैल - الليل 93. सूरतुज्जुहा - الضحى 94. सूरतुश्शरह - الشرح 95. सूरतुत्तीन - التين 96. सूरतुल् अलक - العلق 97. सूरतुल् कद्र - القدر 98. सूरतुल् बैयिनः - البينة 99. सूरतुज्जलजलः - الزلزلة 100. सूरतुल् अादियात - العاديات 101. सूरतुल् कारिअः - القارعة 102. सूरतुत्तकासुर - التكاثر 103. सूरतुल् अस्र - العصر 104. सूरतुल् हुमुजः - الهمزة 105. सूरतुल् फील - الفيل 106. सूरतु कुरैश - قريش 107. सूरतुल् माऊन - الماعون 108. सूरतुल् काैसर - الكوثر 109. सूरतुल् काफिरून - الكافرون 110. सूरतुन्नस्र - النصر 111. सूरतुल् मसद - المسد 112. सूरतुल् इख्लास - الإخلاص 113. सूरतुल् फलक - الفلق 114. सूरतुन्नास - الناس
اللغة العربية - التفسير الميسر اللغة العربية - معاني الكلمات الترجمة الإنجليزية - صحيح انترناشونال اللغة العربية - المختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الإنجليزية - تقي الدين هلالي ومحسن خان الترجمة الإنجليزية - مركز رواد الترجمة الترجمة الإنجليزية - د. وليد بليهش العمري الترجمة الإنجليزية - د. ارفينج الترجمة الإنجليزية - يعقوب الترجمة الفرنسية - مركز نور إنترناشونال الترجمة الفرنسية - رشيد معاش الترجمة الفرنسية - محمد حميد الله الترجمة الإنجليزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة التركية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الفرنسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الإندونيسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الروسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الإسبانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة البنغالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الفارسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الصينية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الإسبانية - عيسى غارسيا الترجمة الإسبانية - مركز نور إنترناشونال الترجمة الإسبانية (أمريكا اللاتينية) - مركز نور إنترناشونال الترجمة البرتغالية - حلمي نصر الترجمة الألمانية - بوبنهايم الترجمة الألمانية - أبو رضا الترجمة الإيطالية - عثمان الشريف الترجمة البلغارية الترجمة الرومانية الترجمة الهولندية الترجمة التركية - شعبان بريتش الترجمة التركية - مركز رواد الترجمة الترجمة التركية - د. علي أوزك وآخرون الترجمة الأذرية - علي خان موساييف الترجمة الجورجية الترجمة المقدونية الترجمة الألبانية - حسان ناهي الترجمة الألبانية - مركز رواد الترجمة - جار العمل عليها الترجمة البوسنية - محمد ميهانوفيتش الترجمة البوسنية - بسيم كوركت الترجمة البوسنية - مركز رواد الترجمة الترجمة الصربية - مركز رواد الترجمة الترجمة الأوكرانية - ميخائيلو يعقوبوفيتش الترجمة الكازاخية - خليفة ألطاي الترجمة الأوزبكية - محمد صادق الترجمة الأوزبكية - مركز رواد الترجمة الترجمة الأوزبكية - علاء الدين منصور الترجمة الطاجيكية - عارفي الترجمة الطاجيكية - خوجه ميروف خوجه مير الترجمة الإندونيسية - شركة سابق الترجمة الإندونيسية - وزارة الشؤون الإسلامية الترجمة الإندونيسية - المجمع الترجمة الفلبينية (تجالوج) الترجمة الملايوية - عبد الله باسمية الترجمة الصينية - محمد مكين الترجمة الأويغورية - الشيخ محمد صالح الترجمة اليابانية - سعيد ساتو الترجمة الكورية - حامد تشوي الترجمة الكورية - مركز رواد الترجمة الترجمة الفيتنامية - مركز رواد الترجمة الترجمة الفيتنامية - حسن عبد الكريم الترجمة التايلاندية الترجمة الخميرية الترجمة الفارسية - مركز رواد الترجمة الترجمة الفارسية - تفسير السعدي الترجمة الفارسية الدرية الترجمة الكردية الترجمة الكردية - صلاح الدين الترجمة الكردية الكرمانجية الترجمة البشتوية - زكريا الترجمة العبرية الترجمة الأردية الترجمة الهندية الترجمة البنغالي - أبو بكر زكريا الترجمة الماراتية الترجمة التلغوية - عبد الرحيم بن محمد الترجمة الغوجراتية الترجمة المليبارية - عبد الحميد حيدر وكنهي محمد الترجمة الأسامية الترجمة التاميلية - عمر شريف الترجمة التاميلية - عبد الحميد باقوي الترجمة السنهالية الترجمة السواحلية - علي محسن البرواني